Amathebulethi ahamba phambili ama-movie wokubuka - asetshenziswa kakhulu (2020) - Amagajethi
Amathebulethi amahle ukubukela ama-movie nokuzijabulisa wena noma kuphi nanoma nini lapho uthanda khona. Ngokungafani nama-TV, unokuthwala ukuwahambisa noma uwahambise. Ama-Smartphones angaphazanyiswa ngakho konke ukushaya, ukuthumela imiyalezo, nezaziso zohlelo lokusebenza. Awukutholi lokho ngamaphilisi.
Njengokuhlanganisa okukhulu, uthola isibonisi esikhulu samathebulethi akho ukuze ubuke ama-movie. Ngabe ufuna i-amaphilisi amahle kakhulu wokubuka ama-movie? Ngoba usendaweni efanele. Sikulethela uhlu olunamathebulethi ahlukile kokukhethwa okulungele isabelomali kuya kwabenza amandla aphezulu.
Kunamagama nemikhiqizo engaziwa kancane konke kuhlanganiswe ndawonye kulesi sibuyekezo. Ngemuva kophenyo olunzulu nokuhlaziywa okujulile, siluhlanganise lolu hlu. Ihlangabezana nohlu lwethu lwezinqubo zokukulethela ukukhetha okunolwazi. Sekukonke, uthola ububanzi obuhlukahlukene ekukhetheni. Nazo-ke!
Amathebulethi Ahamba Phambili Wokubuka Ama-Movie: Ukubuyekeza
1. I-Apple iPad 10.2
Usayizi Wesikrini:10.2 amayintshi
Isitoreji Space:32/128 GB
Impilo yebhethri:10 Amahora
I-Apple ihlala phezulu kwengilazi nge-iPad yayo ekhazimulayo ye-10.2 eza nokukhetha phakathi kwe-WiFi noma i-WiFi & nokwesekwa kweselula kokuxhuma. Iza ne-chip ye-A10 Fusion yejubane elimangalisayo nokufika emahoreni ayi-10 wempilo yebhethri yokuzijabulisa okungami.
Kunekhamera yangemuva engu-8 MP enokuqoshwa okugcwele kwe-HD nekhamera yangaphambili engu-1.2 MB esikhathini sobuso. Njengedivayisi ye-HDR, isekela ukurekhodwa kwevidiyo kwe-1080P okulungele ukubuka ama-movie. Yize inezipika zestiriyo, igcina ikhwalithi yomsindo emnandi.
Iyahambisana namanye amadivayisi ngokuxhuma kweBlueTooth ngesivinini esikhulu. Ngokuvikela okungeziwe, unenzwa yezigxivizo zeminwe. Uma uthanda ubuciko obuncane, buhambisana nepensela ye-apula. Ngakho-ke, ayisiyilungele ama-movie kuphela, kepha neminye imisebenzi yokudala.
Vele, isixhumi sombani singeza kwimodeli yaso ekhazimulayo. Sekukonke, uthola ikhwalithi ye-premium ye-Apple ukusakaza ama-movie noma ukurekhoda amavidiyo ku-HD. Amandla we-32 noma i-128 GB eshibhile ahlangabezana nezimfuneko zakho ezijwayelekile zethebhulethi ye-movie.
I-WiFi nokuxhumeka kwamaselula
Impilo yebhethri ebanzi ngesixhumi sombani
Ikhwalithi yevidiyo nekhwalithi yomsindo (HD)
Ukuqoshwa kwe-HD nokugcina okungu-128GB
Ukuhambisana kwe-Bluetooth kwamanye amadivayisi
Izipikha zestiriyo kungenzeka zingabi okungcono kakhulu kokukhishwa komsindo
Imodeli eyi-128 GB ibiza kakhulu
2. Ithebhulethi ye-Dragon Touch K10
Khombisa:I-HD IPS (1280 x 800)
Usayizi Wesikrini:Amasentimitha ayi-10
Isitoreji Space:16 GB (128 GB Iyanwebiseka)
Impilo yebhethri:5 Amahora
Lapha une-Dragon Touch ebamba iqhaza ohlwini olubonisa ama-intshi ayi-10 HD IPS engavumeli ukukhanya ukuthi kuthinte ukubonakala kwayo. Isici sayo esigqame kakhulu ukuxhaswa kwe-HDMI ukusakaza ama-movie akho ngqo ku-TV. Ngenkathi inikeza isitoreji esingu-16 GB, i-128 GB iyanwetshwa ngokukhululekile.
Ngaphandle kwe-HDMI, uthola izinketho eziningi zokuxhuma njenge-USB port, BlueTooth, ne-WiFi. Ngakho-ke, kungaba 'isiteshi sokuzijabulisa' esifanele ukuphequlula ngokushesha i-intanethi futhi ujabulele ukusakazwa okungapheli kwama-movie. Iprosesa ye-quad-core ene-2 ​​GB RAM igcina ithebhulethi isebenze kahle kakhulu. Inamakhamera amabili wezidingo zakho zokurekhoda noma zokuxhumana.
I-K-10 inama-engeli evidiyo angama-178-degree wesikrini sokuthinta, akukho ukukhanya, akukho ukushintsha kombala, noma i-shades eguquliwe, futhi uthola injabulo yekhwalithi yama-movie engenakulinganiswa. Kodwa-ke, ithebhulethi ngokuqinisekile iyasebenza ekusebenzeni kwebhethri. Inikela ngamahora ama-5 wokusebenza kwevidiyo namahora ayi-7 ekusakazweni komculo, okuphansi kakhulu ohlwini.
Ngasohlangothini oluhle, unezikhulumi ezibili zekhwalithi engcono yomsindo. Ngohlelo lwayo lokusebenza lwe-Android, ungaxhuma ku-Google Play futhi ulande zonke izinhlelo zakho zokuzijabulisa. Kukonke, kuyisinqumo esihle kakhulu kubantu abafuna ithebhulethi engaphansi kwesabelomali sokubuka ama-movie!
I-engeli yokubuka eyi-178-degree
Imbobo ye-Mini-HDMI ukuxhuma ne-TV
Ibiza kakhulu ngokubonisa kwe-HD
Impilo yebhethri ephansi
Isibonisi esincane kakhulu kunamanye amaphilisi ohlwini
3. Ithebhulethi yomlilo HD 10
Usayizi Wesikrini:10.1 amayintshi
Isitoreji Space:32/64 GB (512 GB Iyanwebiseka)
Impilo yebhethri:12 Amahora
I-Amazon ibe nomthelela omkhulu ngokunikela ngamaphilisi ekhwalithi ye-premium ngentengo ebiza kakhulu. Lapha sineThebhulethi yoMlilo HD 10 eza nesibonisi esisesigabeni esingu-1080P HD ukuhlangabezana nezidingo zakho ze-HD movie. Iletha ukusebenza kwebhethri okuphawulekayo kwamahora we-12, amahora we-10 uma usakaza amavidiyo.
Ngaphezu kwalokho, uthola inketho phakathi kwesitoreji esingu-32 no-64 GB esinwebekayo esifinyelela kuma-GB angu-512. Ergo, ithebhulethi ezohlala isikhathi eside. Ngokusebenza, une-2.0 Gigahertz ye-Octa-core processor ne-2 GB RAM, enhle ukuphequlula i-inthanethi nokulayisha imidiya.
Mhlawumbe isici esihle kakhulu ukuthi iThebhulethi inikwe amandla i-Alexa. Ngakho-ke, uthola ukuthembela kumsizi wezwi. Kusho nokuthi uthola ukufinyelela kuzinhlelo zokusebenza ezikhethekile ze-Amazon njenge-Prime Videos, Kindle, Amazon Music, nokunye okuningi. Okhethweni oluhle lwezingane, inephrofayili yezingane.
Ngakho-ke, uma unezingane ezifuna ukubuka ama-movie noma imibukiso, zingakwenza ngokuzikhandla ngaphandle kokuziveza kokuqukethwe okusobala. Uthola i-2 MP ngaphambili nangemuva kwekhamera, ukuxhumeka kwendawo yonke nge-jack audio, i-USB Type-C, iBlueTooth, nezinketho ze-WiFi.
Umsizi wezwi le-Alexa nokusekelwa kwesikhulumi se-Amazon
Ukwenza iphrofayli okunobungane kokutholakala kalula
Ikhwalithi yevidiyo ekhanyayo 1080P (224 PPI)
Umthamo wesitoreji onobungani futhi omangalisayo
Kuthatha cishe amahora ama-4 ukushaja ngokuphelele
Ayinayo ikhwalithi yekhamera ephoqelelayo
4. I-Samsung Galaxy Tab S4 10.5in
Khombisa:I-Super AMOLED (2560 x 1600)
Usayizi Wesikrini:10.5 amayintshi
Isitoreji Space:64/256 GB (400 GB Iyanwebiseka)
Impilo yebhethri:16 Amahora
AbakwaSamsung badlula amanye amaphilisi asohlwini ngamakhono awo aqinile. Uthola isibonisi esingu-10.5 inches se-Super AMOLED esisekela amaphikseli angama-2560 x 1600 ukunikela ngesipiliyoni se-movie ye-Ultra HD. Ukuze ugcwalise isibonisi, uthola izipikha ze-Quad ngokuxhaswa kweDolby Atmos okudlula noma iyiphi enye ithebhulethi esohlwini lokuzijabulisa okwehlukile.
Akukona konke lokho! Uthola amahora we-16 wempilo yebhethri elinamandla lokuzijabulisa okungenakuphazanyiswa nokukhetha okungenzeka phakathi kwesikhala sokugcina esingu-64 no-256 GB. Ungaqhubeka nokwandisa isitoreji sibe ngama-GB ayi-400. Leli yithebulethi elimangalisayo. Une-4 GB RAM ne-Qualcomm Snapdragon 8-core processor (2.35 GHz) ne-Android 8.0 Oreo yokusebenza.
Ngokungafani ne-Apple edinga ukuthi ipeni lokuthinta lithengwe ngokwehlukile, uthola ipeni le-S ngethebhulethi yakho ngokuzilibazisa kokudala. Ngokuqopha, ukuxhumana nesikhathi sokubhekana nobuso, unekhamera yangemuva engu-13 MB nekhamera engaphambili eyi-8 MP. Kokubili kusekelwa ukuqoshwa kwe-HD. Uthola ukusondeza kwedijithali okungu-8x.
Kulula kakhulu ukuhambisa kalula ukubuka ama-movie ngokunethezeka. Ngaphezu kwalokho, inokuxhumeka kwe-BlueTooth ne-WiFi. Kungabiza kancane, kepha uma unesabelomali futhi ufuna isipiliyoni se-movie esisezingeni eliphakeme, asikwazi ukuthola okungcono kunale thebulethi.
Okuhamba phambili ekubonisweni kwekilasi nomsindo
Ukusebenza okunamandla nempilo ebanzi yebhethri
Ikhamera emibili ene-HDR
Isitoreji esiningi esinwebekayo esifinyelela ku-400 GB
Ukusekelwa kwe-Ultra HD kokusakazwa kwe-movie
Kungabiza kancane kunabanye
Ayinamandla kangako, idinga ukunakekelwa nokuvikelwa okufanele
5. Ukuhlangana5 10.1
Isitoreji Space:32 GB (128 GB Iyanwebiseka)
Impilo yebhethri:6 Amahora
Uma ufuna ithebhulethi elinganisela kahle, khona-ke i-Fusion5 ingaba yisinqumo esihle. Ifaka phakathi uhla lwezici, ukuxhumeka, kanye nezinto zokusebenza ukuletha i-'jack yayo yonke imisebenzi 'yokusakaza ama-movie.
Inama-intshi ayi-10.1 wokubonisa kwe-HD IPS wokusakazwa kwekhwalithi ephezulu. Izipikha ezimbili ziletha ikhwalithi yomsindo olinganiselwe kahle. Isitoreji silinganiselwe ku-32 GB, esandiswa kuze kufike ku-128 GB. Ine-1 GB RAM enamahora ama-6 wempilo yebhethri.
Ngamanye amagama, lokhu kungenye yezindlela ezingabizi kakhulu kubantu abafuna amaphilisi okubuka ama-movie ‘enza umsebenzi wenziwe.’ Akukho lutho oluphawuleka ngokukhethekile ngalena, ngaphandle kokuthi ilinganiswe kahle. Uthola zonke izinketho zokuxhuma njenge-BlueTooth, i-WiFi, kanye ne-HDMI port ukuxhuma nesethi yakho ye-TV.
Kukonke, uma umusha emhlabeni wethebhulethi futhi ufuna ukukuhlola ngesabelomali esithile, lokhu kungaba ukukhetha okuhlakaniphile ukuqala ngakho. Ngenye indlela, kuyindlela enhle yesipho.
Kugcwele izici, i-jack-of-all-trade
Inani elongayo kakhulu
Izinketho ezinhle zokuxhuma
Ilungele ama-movie we-HD
Ithebhulethi emaphakathi ayiveli ndawo
Ukuntuleka kwe-RAM kuholela ekuphenduleni kancane
6.I-HAOQIN HaoTab H10
Khombisa:IPS (1280 x 800)
Impilo yebhethri:Amahora ayi-12-14
Manje, kulapho umjaho wokusebenza okuphezulu kwebhethri uqala khona. I-HAOQIN inomkhiqizo omnandi ongawunikela oza nebhethri elinamandla le-6,000 mAh kanye no-10.1 inches wokuboniswa okujwayelekile kwe-1280 x 800 IPS. Ine-32 GB yesitoreji enwebekayo efinyelela ku-128 GB.
Izipikha ezimbili ziqinisekisa ikhwalithi yomsindo ehloniphekile ekusiza ukuthi uthokozele ama-movie ngaphandle kokuhlanekezelwa. Uthola okungenani uphayi we-Android 9.0 nge-1.5 GHz yeprosesa ne-2 GB ye-RAM ukufeza isidingo sakho sokusebenza. Uthola i-2 ne-5 MP yekhamera.
Ngakho-ke ngokubukeka kwayo, isici esigqame kakhulu impilo yayo yebhethri. Kweminye imikhakha, ilinganiselwa kahle futhi imaphakathi maqondana nokuningi. Ungaqaphela ukuthi inesibonisi se-IPS, hhayi isibonisi se-HD IPS. Ngenkathi izodlala futhi isekele ama-movie we-HD, kungahle kungabi yi-HD oyifunayo.
Kodwa-ke, uma impilo yebhethri enamandla nethebulethi engabizi kuyisidingo sakho, lokhu kuzokufanela. Isakwazi ukuletha ukusebenza okungenakuphikiswa okubeka ingxenye namanye ama-android ohlwini.
Ibhethri elimangazayo le-6,000 mAh lithembisa ukusebenza kwamahora ayi-10-14
Zonke izinketho zokuxhuma ezijwayelekile ziyatholakala
Ukusebenza okulinganiselayo nokungenamthungo
I-interface elula nokusetha
Umkhiqizo ongathandwa kakhulu
Ayinayo i-HD Display
Isitoreji Space:32 GB (64 GB Iyanwebiseka)
Izipikha:Izipikha ze-Dual Stereo
Ingabe ufuna ithebhulethi ene-Android yakamuva? Ngemuva kwalokho i-WINNOVO ingahle ibe yidivayisi oyifunayo. Iza nezici zakamuva ezifana nesixhumanisi somndeni, itimu emnyama, imodi yokugxila, isihlungi sokukhanya okwesibhakabhaka, nokunye ukuhlanganiswa okubalulekile.
Uthola i-1.3 GHz yeprosesa ye-quad-core ene-2 ​​GB ye-RAM eletha ukusebenza okuhle kakhulu etafuleni ukuze uthole isipiliyoni esibushelelezi. Kukhona ukuxega okuncane ngezipika zestiriyo, kepha uthola okubili ukuqinisekisa ikhwalithi yomsindo wesipiliyoni esihle sokubuka ama-movie.
Yini enye? Iphuma nesibonisi esingu-10.1 inch HD IPS, ikhamera engemuva eyi-8 MP nekhamera engaphambili eyi-5 MP eqopha kahle nge-HD (720P). Ukuze kube lula ukuhamba, uthola isistimu yokuzulazula ye-GPS eyakhelwe ngaphakathi. Ngakho-ke akuyona nje iyunithi yokuzijabulisa, kodwa umhlahlandlela wakho emigwaqweni.
Kungancipha kancane ngomkhawulo wememori yokwanda kuze kufike ku-64 GB, kepha lowo ngumthamo ohloniphekile. Ngasohlangothini oluhle, uthola ibhethri elinamandla elingama-6,000 mAh lamandla angenamkhawulo nokuzibukela ubukele ama-movie nemibukiso yakho oyithandayo.
I-Android yakamuva enezici ezilula ezifana neBluelight, isixhumanisi somndeni, njll.
6,000 mAh ibhethri elinamandla
Isibonisi se-HD, ukuqoshwa kwe-HD
Ukusebenza okugcwele amandla
Iza nohlelo lokuzula
Isitoreji esilinganiselwe, noma sinwebeka
Isikrini simnyama kancane kunamanye amaphilisi
8.I-Samsung Galaxy Tab A 10.1
Khombisa:Ikhona le-HD eligcwele ukuya ekhoneni
Izipikha:Izipikha ze-Dual Stereo (ezine-Dolby)
Impilo yebhethri:14-15 Amahora
AbakwaSamsung benza ukubuya ohlwini nge-ace emgodini. Lapha ungahle ube neyodwa yamathebulethi amahle kakhulu wokubuka ama-movie. Ngokuboniswa okubanzi kwekona ukuya ekhoneni ngamayintshi ayi-10.1, ukuxhaswa okugcwele kwe-HD, namakhono omsindo weDolby Atmos, iGalaxy Tab A ingamaligi ngaphezu kwamanye amaphilisi ohlwini. Okungenani, maqondana nesipiliyoni sokuntywila.
Uthola umzimba wensimbi wokuqina okungeziwe, okwenza kube okuphathekayo ngaphandle kokukhathazeka. Ukuhlangenwe nakho kwe-cinematic eyiqiniso, lokhu kuyisinqumo esihle. Akukhona lokho kuphela. Uthola ngaphezu kwe-6100 mAh yempilo yebhethri, okwenza ihlale noma kuphi phakathi kwamahora ayi-12 kuye kwayi-15 ekusebenzeni kokusakazwa okungapheli.
Inekhamera ejwayelekile ye-5 MP ngaphambili nekhamera yangemuva eyi-8 MP, kepha nge-HD Recording. Ngaphandle komzimba wensimbi, unomzimba osindayo (1 amakhilogremu). Okubaluleke kakhulu, ukuhlangabezana nezidingo zakho zokugcina, ungakhetha phakathi kwememori engama-32, 64, no-128 GB.
Kukhona okuningi! Unganweba le nkumbulo ibe cishe ngama-512 GB ukuhlangabezana nemfuneko yakho yokugcina engapheli. Lesi, sinikeze phansi, elinye lamaphilisi ahamba phambili ohlwini. Kodwa-ke, ukuthola konke lokhu kungcebeleka, kubiza kakhulu nge-Android yakamuva kunabanye abasohlwini.
Ikhoneni ekhoneni isibonisi esingu-10'1 inch Full-HD
Imemori inwebeka ifike kuma-GB ayi-512
Insimbi kepha umzimba osindayo wokuqina okungeziwe
3 GB ye-RAM
Ukusekelwa komsindo kweDolby Atmos
Kubiza kakhulu kunamanye amaphilisi ohlwini
Idizayinelwe ukusetshenziswa komuntu oyedwa
Umhlahlandlela Womthengi Wokuthola Ithebhulethi Engcono Kakhulu Yokubuka Amamuvi:
Ukukusiza wenze isinqumo esingcono, sikulethela umhlahlandlela womthengi onemininingwane. Ngosizo lwalesi siqondisi, uzokwazi ngokunembile izici okufanele uzicabangele. Lo mhlahlandlela uhlose ukuhlinzeka ngolwazi.
Ngakho-ke, akuhloselwe ukuthonya isinqumo sakho sokuthenga nganoma iyiphi indlela. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi awuzisoli ngokukhetha kwakho. Ngalokho, sikulethela uhlu olubanzi lwezinto okufanele uzicabangele:
Ikhwalithi Yokubonisa Nosayizi -
Vele, ufuna ithebhulethi yokubuka ama-movie, ngakho-ke kufanele ibe nombukiso omkhulu. Uma ingenayo okungenani amasentimitha ayi-10 wokubonisa, ingabe kufanelekile? Ngoba noma yini encane kunalokho futhi kufanele ucabangele i-smartphone esikhundleni. Ngakho-ke, isibonisi esingu-10-intshi siyisidingo esincane.
Ikhwalithi yezindaba zokubonisa. Kunama-LED amaningi noma ama-LCD ngaphandle kwamaphikseli acatshangelwayo. Uma ufuna ukudlala ama-movie anokucaca okuphezulu, kufanele uhlole uhla lwamaphikseli wokubonisa. Kukhona i-HD ejwayelekile, i-1080P, i-Ultra HD 4K, nezinye izinketho eziningi. Noma kunjalo, i-HD IPS ingenza umsebenzi wokunikeza ikhwalithi ethembekile.
Ukubonakala Okungcono -
Manje, ngaphandle kokuxhaswa kwekhwalithi nosayizi, ukukhanya kwesibonisi kuzoba yingxenye. Akufanele ixege noma ifiphalaze ekukhanyeni okweqile. Inketho yokukhanya eguquguqukayo eyengeziwe ihle, kepha kwezinye izimo, ngisho nokukhanya okuphezulu ngeke kwanele ekukhanyeni kwelanga, ngakho-ke qiniseka ukuthi unesibonisi esinokukhanya okuhle.
Ama-glares angakhathaza, ngakho-ke kungaba njalo ukubonisa kwesibonisi. Amanye amaphilisi anciphisa noma aqede le nkinga. Kodwa-ke, uma ungenza okungeziwe ngokungeza isikrini esivikelayo, kulungile futhi. Okubaluleke kakhulu, ezinye izibonisi ze-LED noma ze-LCD zinenkinga ngokubonakala.
Kusukela kukona ethile, kungaba nzima ukubuka okwenzekayo. Kungaba ngenxa yokushoda kwemibala, kwezinye izimo, imibala eguquliwe. Qiniseka ukuthi unesibonisi esinokubonakala okungcono okuvela ezinhlangothini ezahlukene, ikakhulukazi uma ufuna ukusithokozela nomndeni wakho.
Ikhwalithi yomsindo -
Ngaphandle kokubonwayo okumangalisa, udinga ikhwalithi yomsindo engenakuphikiswa. Ngemuva kwakho konke, ngaphandle kokukhishwa komsindo okuhle, ngeke ukwazi ukujabulela ama-movie akho.
Abakhiqizi abaningi bayakwazi ukonakalisa ikhwalithi yomsindo. Imikhiqizo efana ne-Apple noma i-Samsung ingagcina ikhwalithi emangalisayo, kepha udinga ukuzihlola ngokwakho. Isibonelo, uma ungahlelile ukusebenzisa amahedfoni we-Bluetooth noma izipikha, izipikha ezakhelwe ngaphakathi kufanele zibe phezulu.
Ungavumeli isikhulumi ‘esakhelwe ngaphakathi’ sizithethele. Ubuchwepheshe besimanje benza abakhiqizi ukuletha ikhwalithi yomsindo ekhanyayo ngokufakwayo kwe-HD. Kufanele kube nesilinganisi noma ukusekelwa kwephrofayili yomsindo. Uma kungenjalo, ukwesekwa komsindo kweDolby kungancomeka.
Izinketho zokuxhumana -
Ukuxhumeka kwe-WiFi kuyinto ebaluleke kakhulu, noma ngabe ithebhulethi ingenakho ukuxhumana kwamaselula. Kodwa-ke, uma kukhona imbobo ye-HDMI, ungaxhuma ithebhulethi yakho ku-TV, okuyindlela enhle kakhulu uma ufuna ukubonisa okugqame kakhulu.
IBlueTooth izobaluleke kakhulu ukuxhumana namanye amadivayisi njengezipikha zokukhipha okungcono. Ngenye indlela, i-audio jack ingayifeza indima ngokwanele. Sekukonke, ukuxhumana ngaphandle kwe-WiFi akubalulekile kangako kepha kungabaluleka ngokwenhloso yakho.
Izindlela zokusebenza -
Ithebhulethi yakhelwe ukukusiza njengeyunithi yokuzijabulisa eyenza ukwazi ukwenza umsebenzi othile wobungcweti. Kodwa-ke, uma imfuneko yakho ingeyethebhulethi engcono kakhulu yokubuka i-movie, lokhu kungashintsha kancane ngezidingo zokusebenza ezimbalwa.
Uzodinga ubuncane be-1 GB RAM ngeprosesa efanelekile ukuqinisekisa ukuthi ithebhulethi ingakwazi ukusakaza ukusakazwa kwe-HD, okungenani. Izinhlelo zokusebenza eziningana ezinjengeNetflix, Prime Videos, noma iDisney + Hotstar, azidingi amadivayisi asebenza kanzima.
Ngakho-ke, ungathola uma nje ungazilayisha kalula futhi ube nokuxhumeka kwe-inthanethi okusheshayo.
Izidingo Zokugcina -
Akekho ofuna ukuba nokuncane ngaphansi kwama-movie we-HD nemibukiso. Ngokuzenzakalelayo, ngisho nevidiyo engangehora ingaba usayizi ongu-1 kuye ku-2 GB. Ifilimu ejwayelekile icishe ibe ngamahora ama-2, ngakho-ke udinga okungenani u-3-4 GB wokugcina nge-movie ngayinye okungenani. Manje, ngalokhu kubalwa, ungaqonda ukuthi ukugcina kungaba yimfuneko ebaluleke kakhulu.
Ubuncane obuyi-32 GB besitoreji bubalulekile ukuze kube nethebulethi engajabulisa. Uzofaka izinhlelo zokusebenza ezibalulekile ezizodla isikhala esingeziwe. Uma ungenayo okungenani i-64 GB yesitoreji ezweni lanamuhla ledijithali elisheshayo, ithebhulethi yakho ingaba yize.
Ngenye indlela, akunandaba ukuthi ithebhulethi yakho ine-16 GB yesikhala, inqobo nje uma inenkumbulo enwebekayo. Uma okungenani inememori engu-64 GB eya ku-128GB enwebekayo, kufanelekile ukucatshangelwa. Ngamanye amagama, ungatshala imali kamuva ukunweba umthamo wokugcina wethebhulethi yakho. Ukugcinwa kwamafu nakho sekuyindlela esebenzayo yabantu ukuthi bayicabangele. Kungasusa isidingo sakho sokugcina.
Uma ukhetha ukusakaza ngqo kusuka kuhlelo lokusebenza ngaphandle kokulanda, awudingi isitoreji esiningi. Noma kunjalo, i-64 GB kufanele ibe khona kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ezibalulekile. Kungasiza futhi ngokusebenza kwethebhulethi yakho.
Uhlelo Lokusebenza Lwesixhumi -
I-interface yomsebenzisi nokusebenziseka kalula kwamathebulethi kubaluleke kakhulu. Ungabheka izici ezingeziwe njengezilawuli nemiyalo. Okubaluleke kakhulu kunalokho uhlelo olusebenzayo. Uhlelo olusebenzayo lomsindo luzohlinzeka ngezinzuzo ezengeziwe, ikakhulukazi ezokuphepha.
Kungcono ukuba nohlelo lokusebenza lwakamuva, noma ngabe uthola i-Apple, iOS, noma iWindows. Uma ithebhulethi iza nenguqulo endala, kufanele isekele ukuthuthukela kunguqulo yakamuva. Ezinye izinhlelo zokusebenza kungenzeka zingasebenzi uma ungenawo amasistimu wokusebenza wakamuva.
IOS ine-interface ebushelelezi. I-Android inokuguquguquka okuthe xaxa, futhi iWindows ingcono ekusetshenzisweni kobuchwepheshe. Ngakho-ke khetha ithebhulethi ene-OS ngokuya ngemfuneko yakho.
Inzuzo yamathebulethi ukuthi iyaphatheka kalula. Ithebhulethi kufanele ibe engasindi kepha inkulu ngokwanele ukwenza umehluko uma iqhathaniswa ne-smartphone yakho. Ungahle ungadingi ilaptop yonke indawo uma une-tablet eguquguqukayo.
Ngokuphawulekayo, kuya ngenhloso yakho. Uma ungafuni ukuphatha ithebhulethi yakho yonke indawo futhi ufuna ukushintshwa kwesethi ye-TV 'eqinile,' ungakhetha ithebhulethi. Ngenye indlela, uma uzohamba nayo yonke indawo lapho uya khona, kudingeka uqiniseke ukuthi idizayini nezinto ezibonakalayo zihlala isikhathi eside.
Ngaphezu kwalokho, kuzofanele ucabangele ukuthi uzogcina kanjani futhi uphathe ithebhulethi yakho. Uma ugcina lezi zinto engqondweni, ungenza ukhetho olungcono lwethebhulethi.
Impilo yebhethri nokushaja -
Okokuzijabulisa okungapheli, impilo yebhethri idlala indima ebalulekile. Njengoba sishilo ngenhla, isiqephu singaba imizuzu engama-20-40 ubude, kanti i-movie ingaba okungenani imizuzu engama-90 ubude. Kukhona nezinye izidingo zethebhulethi, futhi.
Ngakho-ke, udinga okungenani amahora ama-5 wempilo yebhethri yethebhulethi esimeme. Kulungile uma kufanele ukhokhise ngemuva kwamahora ama-5, inqobo nje uma ineshaja enejubane elikhulu. Inketho ye-plug and play yokusebenzisa ithebhulethi ngenkathi ivuselelwa kungaba yindlela elula.
Kodwa-ke, uma ufuna ngokweqiniso ukuzijabulisa okungenakuphazanyiswa, impilo yebhethri ebanzi yamahora ayi-10 noma kunjalo kufanele icatshangelwe, ikakhulukazi uma uhamba kaningi. Ngakho-ke khetha ngokuhlakanipha ngoba njengoba amaphesenti ebhethri ehla, kuzothinta ukusebenza kukonke kwethebhulethi.
Ezinye Izinto Ongazibheka:
Manje, nalu uhlu lwezici ezimbalwa ezingeziwe noma izimpahla ongazifuna:
Umsizi we-AI njengo-Alexa for Fire Tablet angaba ukwengeza okubalulekile
Ukuthinta ipeni noma ipensela ngemfuneko yobungcweti nobuciko kungaba ukuhlanganisa
Iwaranti eyengeziwe noma uhlobo oluthile lwesiqinisekiso kungaba yisinqumo esihle
Ukusebenzisana namanye amadivayisi afana nama-earphone, ama-headphone kufanele kubhekwe
Isihlungi sokukhanya okwesibhakabhaka singaba yinto enhle kakhulu ongasibheka, ikakhulukazi ekubukeni isikhathi sasebusuku
1Q. Kufanele Ithebhulethi Ibe Nengakanani I-RAM?
Iminyaka:Ithebhulethi kufanele ifike okungenani ku-1 GB RAM uma ufuna ukusebenza okuncane. Ukuphequlula nokusakaza okuningi kudinga okungenani u-1GB kuye ku-2GB wenqama. Uma uthola i-4 GB ye-RAM yethebhulethi, lokho kuyithuluzi lokusebenza okuphezulu.
2Q. Kungani Kufanele Ngithenge Ithebhulethi Esikhundleni Se-Smartphone?
Iminyaka:Isibonisi esivelele kakhulu nesilinganiso sesici esingcono yizizathu ezimbili zokuthenga ithebhulethi, ikakhulukazi ukubuka ama-movie. Ngisho nezingcingo zakamuva zinomkhawulo wokubonisa wamasentimitha ayisithupha. Ifoni yakwa-Samsung egoqekayo inesibonisi esingu-7.3 inches kahle kakhulu. Ngamathebulethi, uthola okungenani amasentimitha ayi-10 wokubonisa okumangazayo.
Ukubaluleka kwesilinganiso ngokulingana okufanele nokuhlukaniswa kwevidiyo yama-aesthetics alinganiselayo nesipiliyoni sokuntywila. Amafoni amaningi anokuboniswa okungama-intshi angu-6 + anobubanzi obuncane obenza bangafaneleki ukuthola umuzwa we-movie omuhle kakhulu.
3Q. Ingabe Ithebhulethi Ingcono Kune-TV?
Iminyaka:Maningi ama-smart TV atholakalayo, kodwa wonke abiza kakhulu. Ithebhulethi iyaphatheka futhi inosayizi ofanele wesikrini. Kuya ngebhajethi yakho nezidingo zakho. Uma unemali ye-smart TV Set, ngakho-ke asikho isidingo sokuthi utshale imali kuthebhulethi. Kodwa-ke, uma udinga isikrini esikhulu esiphathekayo kwezokuzijabulisa, ikakhulukazi ukubuka ama-movie, ithebhulethi ingaba yinhle ngaphansi kwesabelomali.
4Q. Ngingaxhuma Izipikha ze-BlueTooth Namathebulethi?
Iminyaka:Kuya ngemodeli yethebhulethi yakho. Amathebulethi amaningi akamuva eza neBlueTooth evumela ukuxhumana kwamanye amadivayisi. Noma kunjalo, kusekhona abanye abangenayo le nketho. Hlola njalo ukuqinisekisa ukuthi ithebhulethi yakho inokusekelwa okufanele kweBlueTooth uma ufuna ukusebenzisa izipikha.
5Q. Ingabe Ukukhishwa Kwe-HDMI Kukufanele Emathebhulethi?
Iminyaka:Uma ungumnikazi wesethi ye-TV engeyona i-smart TV eqhuba izinhlelo zokusebenza zakamuva, ithebhulethi enokukhishwa kwe-HDMI kufanelekile. Ukuxhumeka kuzokuvumela ukuthi ube nedivayisi ehlakaniphile enazo zonke izinhlelo zakho zokusebenza ozithandayo kusibonisi esikhulu. Kuyindlela engabizi kakhulu yokujabulela izinsiza zokusakaza ku-TV yakho. Ngamafuphi, kuyinto efanelekile.
Ukusakaza ama-movie nemibukiso eku-inthanethi sekuyinto evamile emhlabeni. Wonke umuntu ufuna izindlela ezifanele zokuzijabulisa futhi ajabulele ama-movie wabo we-Netflix, Prime, noma HD ngokujwayelekile. Lezi yizonaamaphilisi amahle kakhulu wokubuka ama-movie esingawathola ngaphansi kwesabelomali esithile ukuhlangabezana naleyo nhloso.
Lokhu akudluli phezulu ukwenza kube nzima ukuthenga. Elinye lalezi zibhebhe lithengeka kakhulu futhi lingaba inketho enkulu yesipho, futhi. Siyethemba ukuthi uyaluthanda lolu hlu njengoba lwenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zakho ngazinye.
Ungase Uthande Nokufunda:
Thola iHulu Student Discount
amadivayisi asekela i-disney plus
ikhodi ye-psn code generator
Isivivinyo samahhala senyanga engu-1 se-amazon
Ikhodi ye-netflix yamahhala yenyanga eyodwa
i-watergirl ne-fireboy 4 abavuliwe
bukela ama-movie we-inthanethi ekusakazweni kwamahhala